Tag: digital kudhinda | Martech Zone
Tag: kudhinda kwedhijitari
Specle: Yakabatanidzwa Yekushambadzira Sisitimu yeDhijitari Kudhinda
Mugovera, Nyamavhuvhu 1, 2015 Muvhuro, October 12, 2015 Douglas Karr
Niche zvinyorwa zvichiri kuenderera mberi nekutyaira zvakanyanya kunongedzwa zvemukati kune akasiyana mapoka Nepo kubhadhara-pa-kubaya-batana, zvakabatana uye mabhana emadhijitari masisitimu anoramba achitonga pamusika wehurongwa hwavo hwakareruka hwekuodha uye mutengo wakaderera pamutungamiri, ivo vanowanzo tora yakaderera bato uye chiyero chekushandura. Nekuti iwo anodhura, ivo vanogona vachiri kukohwa mibairo inoshamisa uye vane kudzoka kwakasimba pane yekudyara kwevatengesi. Funga nezve iwe pachako kubhurawuza uye kutsvagisa maitiro. Sezvandinotarisa kune yangu
China, Gumiguru 3, 2013 NeChishanu, Gunyana 26, 2014 Douglas Karr
Lucidpress beta ndeyewebhu-yakavakirwa, yekuzvuva-uye-kudonhedza dhizaini yekudhinda uye yekushambadzira yedhijitari. Iyo app inobvumidza chero munhu kuti agadzire zvirinyore zvemukati zveunyanzvi zvekudhinda kana webhu, uye inogona kushandiswa mune bhizinesi kana nharaunda nharaunda. Iko desktop software inosara kumashure kwezvazvino zvitsva zvemusika wakashanduka, tinoona ramangwana rakajeka newebhu-based application. NaLucidpress, chinangwa chedu ndechekuita kuti zvive nyore kune chero munhu kuti agadzire zvinoshamisira zvemukati sekugadzira
Isu tanga tichiedza nemutengi wedu, Zmags, kune vamwe vatengi uye muoni wavo akatonhorera. Ini ndaida kuratidza mimwe mienzaniso ye, izvo zvandinotenda, ndeimwe inoshamisa inofambidzana manyorerwo edhijitari! Kuti uzarure muoni, ingofa pikicha yemuoni! Vatengi veZmags Commerce Pro chigadzirwa vari kuona zviitiko zvinoshamisa, zvinosanganisira kuwedzera kwe5x mumaonero peji, 2x nguva yakashandiswa panzvimbo, kusvika kumusoro kwe2x mukutendeuka uye
Wedu Ecommerce anotsigira, Zmags, yaburitsa nyowani nyowani yekutsikisa yedhijitari. Verge ™ inobvumidza makambani kushandura maPDF (uye zvimwe zvirimo) kuita muoni uko ivo vanogona kufukidza data, mifananidzo, vhidhiyo, uye kunyangwe yavo ecommerce chikuva. Muoni anogona kutumirwa pakombuta, nharembozha uye piritsi kuburikidza neyakareruka manejimendi chikuva. Uku ndiko kufambira mberi mukushambadzira kwedigital, zvichibvumira makambani kuvaka zviitiko zvinofambidzana uye zvine chekuita pavanogona kutengesa zvakananga Kare,